Ungawenza njani uMsebenzi oBodwa | Martech Zone
Ungawenza njani umsebenzi omnye
NgoLwesihlanu, Agasti 28, 2009 Douglas Karr
Wonke umntu uthetha ngendlela yokwenza imisebenzi emininzi… izolo bendinencoko noDavid ovela kwi Izixhobo zoMsebenzi waseBrown County iziko kwaye saxoxa ukwenza umsebenzi omnye. Oko kukuthi ... ukucima ifowuni yakho, i-app ye-desktop ye-twitter, ukuvala i-imeyile, ukucima izilumkiso-kunye nokwenza umsebenzi othile.
Zininzi izinto eziphazamisayo kule mihla, kwaye zichaphazela umgangatho womsebenzi wethu.
Andingomntu othanda ukwenza imisebenzi emininzi. Abantu endisebenza nabo abavela kwimisebenzi yangaphambili bayakuqinisekisa ukuba ndiyintloko. Ndiyathanda ukufumana ikona, gxila kule ndiyenzayo, kwaye ndiyenze. Ngamanye amaxesha babedla ngokuza kum baxoxe ngenye iprojekthi, kwaye ndandibajonga njenge zombie… ndingasakhumbuli nokuba bandibuza umbuzo.
Intombi yam iyakuthanda oku, ngendlela ... oku kuqhele ukuba xa icela imvume yokwenza izinto endinokuthi hayi kuzo. 🙂
Nokuba kunjalo… zama! Ukuba uneBlackberry, yiguqule ithule (ingangcangcazeli) kwaye uyijike phezu kwedesika ukuze ungaboni ubuso bayo bukhanya xa umyalezo omtsha ubetha. Ukuba uya entlanganisweni, shiya ifowuni yakho kwidesika yakho kwaye ujolise kwintlanganiso. Ukuba unegumbi labaphathi entlanganisweni, loo ntlanganiso inokuxabisa ishishini lakho amawaka eedola. Beka phantsi ifowuni kwaye wenze umsebenzi!
Zama kule veki izayo- vimba iiyure ezi-2 ukuya kwezi-3 ngqo kwikhalenda yakho ngoMvulo. Thatha isigqibo ngeprojekthi oza kusebenza kuyo. Vala umnyango wakho, cima zonke izilumkiso zedesktop, kwaye uqalise. Uya kumangaliswa ngumsebenzi omninzi oya kuwufezekisa.
tags: Izicwangciso ze-imeyileukuthengisa umcimbiIdityanisiweMySpaceIPintrestIipodcasts
Imidiya yokuncokola PR - iingozi kunye nemivuzo
AbaThengi abaThengi ukuFezekisa kwakhona
Aug 28, 2009 ngo-8:50 PM
Ulibele icebiso elinye ukuba ufuna ukwenza umsebenzi omnye olungileyo… ungazami ukwenza umsebenzi wakho wenziwe kwiNdebe yeBhotyi!
Aug 29, 2009 ngo-12:31 PM
Lihlabathi lemisebenzi emininzi, kwaye kufuneka silawule ixesha ukwenza imisebenzi emininzi ngexesha elinye. Phofu enkosi ngokwabelana ngezimvo zakho.
Agasti 30, 2009 kwi-1: 16 AM
Ingcebiso entle kakhulu.. Ndicinga ukuba ndingazama oku namhlanje kumsebenzi wasekhaya. Kodwa ndiyabona apho u-Emma Adams avela khona.
Ngapha koko, iposti enkulu..
Sep 1, 2009 kwi-3: 22 AM
Doug… bendikhangela ubuchule obulungileyo bokwenza umsebenzi omnye kwaye ndadibana nelungileyo… Ndisebenzisa ubuchule bePomodoro ( http://www.pomodorotechnique.com/ ) xa ndifuna ukugxila ekwenzeni into ethile kwaye kufuneka ndiyenze kangangexesha elithile. Andibonakali ndiyisebenzisa ngeentsuku zikaMeyi ezizaliswe ziintlanganiso, kodwa xa ndinento eninzi yokwenza, yeyona ndlela ibalaseleyo endiyifumeneyo… Ngokusisiseko, iPomodoro lithuba lemizuzu engama-25 lomsebenzi kumntu ngamnye kunye nemizuzu emi-5. yekhefu. 4 iipomodoro kwaye uthathe ikhefu lemizuzu engama-30… kuninzi endikwenzileyo ndisebenzisa obu buchule….
Sep 8, 2009 ngo-1:21 PM
Enkosi ngesi sithuba sikhulu, indenze ndacinga… Bendicima izaziso kwi-TweetDeck kunye neDigsby ukugcina inani leziphazamiso liphantsi ngelixa usebenza.
Sep 14, 2009 ngo-2:42 PM
Ndiyayithanda indlela othethe ngayo ukuba ufana ne-zombie xa ugxile kumsebenzi omnye. Ndabhala isithuba malunga Zombies kunye noBugcisa bokwenza umsebenzi omnye.